Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » शोकमा डुबेको मान्छे जस्तो यसपालिको दशैँ – देव सजन सुनार
शोकमा डुबेको मान्छे जस्तो यसपालिको दशैँ – देव सजन सुनार
देव सजन सुनार
@देव सजन सुनार
२०७७ कार्तिक १० गते सोमबार ०५:२१
अफिस पुरै खाली जस्तै भयो टाढाका सबै घर जानू भयो । नजिकका पनि बिस्तार जान थाल्नु भयो ।।मेरो पनि मनले मानेन दशै न हो घर आउन मन लागि हाल्यो । अष्ठमीको बेलुका तिर म घर पुगे टाढा भएका एक दुई जना साथीहरु घर आएका रहेछन । पहिले को जस्तै न रमाइलो थियो न दशै आएको जस्तै थियो । गाउँ पुरै सुनसान छ । न कतै बादल बच्छ न कुनै सिङ्गारु गाएको गित सुनिन्छ । मानौ पुरै देश शोकमा छ सुनसान !सुनसान !
कर्णाली लगाएत पश्चिम नेपालमा अधिकाम्स मान्छेहरु पैसा कमाउन कालापार ( भारत) जाने चलन छ । कुनै बेला म पनि कालापार जान्थे कालापार बाट फर्केको मान्छेले दशै बोकेर ल्याऊथ्यो ।
सानै उमेरमा कतिपय त रहरले कतिपय त बाध्यताले कालापार जान्छन ( म भने बाध्यताले जाने गर्थे ) यो भन्दा केही बर्ष अगाडि कालापार बाट आउनेले टेप ल्याउने चलन थियो । काधमा टेप झोलामा ब्याट्री र क्यासेड हुन्थे । गाउँको रौनक नै फरक हुन्थ्यो तर अहिले भने मोबाइल ल्याउने चलन छ ।मैले न टेप ल्याए न मोबाइल किन कि मेरो बाध्यता अर्कै थियो ।
गाउँ आए पछि स्थानीय संस्कृति अनुसार नाच हुन्थ्यो दसै मनाउन आएकि माइतमा छोरी, चेलीलाई देखाउनका लागि सिङ्गारु ,पैँसारु लगाएतका नाच नाचिन्थ्यो । मेरो बा सिङ्गारु गित खुब गाउनु हुन्थ्यो मेला ,जात्रा ,चाडपर्वमा मेरो बा’लाई नलिएको कुनै ठाउँ नै हुदैन्थ्यो । पछि बा बिते पछि गाउँमा सिङ्गारु नाच नाच्न छोडियो । अहिले त लोभ भए जस्तै छ ।
समय अनुसार दशै पनि फरक फरक हुँदै जादो रहेछ । यसपाली बिश्व महामारीले आतंकीत छ नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालीहरुको महान पर्व दशै आयो म जागिरको सिलसिलामा ओखलढुंगा थिए । केही महिना अगाडि मामा घरमा हजुरआमा बित्नु भएको थियो आमाको टीका थिएन मलाई पनि खासै आउने मन थिएन ।
अफिस पुरै खाली जस्तै भयो टाढाका सबै घर जानू भयो । नजिकका पनि बिस्तार जान थाल्नु भयो ।।मेरो पनि मनले मानेन दशै न हो घर आउन मन लागि हाल्यो ।
अष्ठमीको बेलुका तिर म घर पुगे टाढा भएका एक दुई जना साथीहरु घर आएका रहेछन । पहिले को जस्तै न रमाइलो थियो न दशै आएको जस्तै थियो । गाउँ पुरै सुनसान छ । न कतै बादल बच्छ न कुनै सिङ्गारु गाएको गित सुनिन्छ ।
मानौ पुरै देश शोकमा छ सुनसान !सुनसान !
प्रकाशित मिति १० कार्तिक २०७७, सोमबार १७:२१